Public Health in Myanmar: Homo- အတူတူကို စိတ်ဝင်စားခြင်း
Gay ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အရင်က အပူအပင်ကင်းသူ၊ ပျော်ပျော်နေသူ၊ ထက်မြက်သူ၊ စတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးခဲ့ရာကနေ ဒီလို ပြောတာကိုတောင်မှ မသိရတော့လောက်အောင် “လိင်တူသမား” တွေလို့သာ မှတ်လာကြတာက ၂၀ ရာစု ရောက်ခါနီးမှပါ။ လိင်တူ ဆိုတာတောင် ကျား-ကျား၊ မ-မ နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ ဆိုင်ပေမဲ့ ၂၁ ရာစုထဲမှာ (မ) တွေအတွက် Lesbian စကားလုံးကို ပေးပြီး၊ (ဂေး) ကို ယောက်ျားသားတွေက အပိုင်သိမ်းလာကြတယ်။
မျက်မှောက်ကမ္ဘာမှာ လူတိုင်း Brainwashed ဦးနှောက် ဆေးခံနေကြရတယ် မဟုတ်ပါလား။ ရေဒီယိုနားထောင်၊ ရုပ်ရှင်-ပြဇာတ် ကြည့်ကြည့်၊ ကြော်ညာတွေ မြင်မြင်၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာတော့ မပြောနဲ့၊ အစိုးရကသာ ထုတ်ခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သတင်းစာကအစ ဖြစ်စေချင်တာ၊ ဖတ်စေချင်တာတွေကိုသာ၊ သည်းခြေကြိုက်တွေကိုသာ 24 x7မဖတ်ချင်၊ မကြားချင်၊ မမြင်ချင် အဆုံး။ ဒီအထဲမှာ Homosexuality လဲပါတယ်။ ၂၀၀၉ တုံးက “မောင်မစ္စက ပြိုင်ပွဲကြီး ရန်ကုန်မှာ ခမ်းနားစွာ ကျင်းပ” လို့ ဖတ်ရဘူးတယ်။
“ဆီးချိုရှိနေလို့ အချိုမစားရဘူး” ဆိုပြီး ဆရာဝန်က မှာထားတယ်။ လိုက်နာ စောင့်ထိန်းသူတွေက လိုက်နာတော့ အသက် ရှည်တယ်။ “ဆရာဝန်စကား မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ထား” လို့ ပြောချင်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ “ဆီးချိုသမား အချို မစားတာ အချိုကို မကြိုက်တော့တာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ဆိုချင်တာပါ။ စိတ်ထဲ ကျန်နေနေ၊ နုတ်နဲ့ ရုပ်မပါနဲ့၊ ကိုယ်မပါနဲ့။
အခုပြောင်းဘို့ ဖြစ်လာနေတဲ့ အမေရိကန် စစ်မှုထမ်းဥပဒေက Don't Ask Don't Tell policy (ကျား) လား၊ (မ) လား၊ (ဂေး) လား၊ (လက်စဘီယန်) လား၊ “မေးလဲ မမေးနဲ့၊ မေးလဲ ဖြေစရာမလိုဘူး” တဲ့။
Labels: Lifestyle, Q and A, Sex Education
ယောက်ကျားလေး ဆိုရင် သူ့အမေ အ ပေါ်မှာ စိတ်မကျေနပ်မူ ငယ်ငယ် ထဲကရှိ နိုင်ပါတယ်။အမေ နောက်ယောက်ကျား ယူပြီ မိသားစုကို ပစ်ပြေးသွားတာတို့ပေါ့။ then when he grow up, he become afraid and can't put any believe on opposite sex. he don't feel safe with opposite sex.automatically turn to same sex.
မိန်ကလေး ဆိုရင်သူ့ အဖေပေါ့။
I don't want to say forget your unhappy and dissatisfied things.
Please Let it go likeabad dream.
ခွိင့်လွှတ်ခြင်း ဟာ လဲ အကောင်း ဆုံးကု ထုံးတစ်ခုပါပဲ
Thetnaing Tun said...
Grey hair ဆံပင်ဖြူတာ